Jesu Anotiponesa—Sei Tichida Kuponeswa?
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chiyao Chokwe Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kamba Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Mam Mambwe-Lungu Maya Mazatec (Huautla) Mixe (North Central) Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
NYAYA IRI PAKAVHA | JESU ANOTIPONESA—PACHII?
Sei Tichida Kuponeswa?
“Munhu, akaberekwa nomukadzi, anorarama kwenguva pfupi uye akamomoterwa nezvinhu zvinonetsa. Anobuda seruva, ogurwa, anotiza somumvuri uye haarambi aripo.”—Jobho 14:1, 2.
Kubvira kare, vanhu vagara vachida kuramba vari vaduku, vaine utano hwakanaka nekusingaperi. Asi zvinosuwisa kuti tinongofa chete. Zvakataurwa naJobho makore anopfuura 3 000 adarika, pana Jobho 14:1, 2 ndizvo zvichiri kuitika.
Munhu wese ane chido chakasimba chekurarama nekusingaperi. Bhaibheri rinotiudza kuti Mwari akaisa mumwoyo medu chido chekurarama nekusingaperi uye chekuda kuziva kuti upenyu hwacho huchange hwakaita sei. (Muparidzi 3:11) Saka zvine musoro here kwauri kuti Mwari ane rudo atipe chido ichocho, izvo zvisingakwanisike? Kana wati hazvina musoro, wagona. Shoko raMwari rinoti rufu muvengi uye rinovimbisa kuti ‘ruchaparadzwa.’—1 VaKorinde 15:26.
Zviri pachena kuti rufu muvengi. Hapana munhu anofunga zvakanaka angarufarira. Patinoona zvinhu zvava kuda kuipa tinonzvenga, tinohwanda kana kutiza. Patinorwara, tinotsvaka rubatsiro kuti tipore. Tinoita zvose zvatinogona kuti tingwarire zvinhu zvinogona kutiuraya.
Pane here zvingaita kuti tive nechivimbo chekuti muvengi uyu ava nemakore achaparadzwa? Hongu zviripo. Jehovha Mwari, Musiki, haana kusika vanhu kuti vangorarama makore mashomanana. Anga asingadi kuti vanhu vafe. Aida kuti vanhu vararame nariini panyika, uye anozadzisa zvaanenge ataura.—Isaya 55:11.
Asi, rufu ruchapera sei? Vanhu vakabvira kare vachiedza kubvisa rufu, asi vachitadza. Nanhasi, vanhu vari kuramba vachiedza. Masayendisiti akagadzira mishonga inoshanda pakudzivirira nekurapa zvimwe zvirwere. Akakwanisa kunyatsoongorora masero ezvinhu zvipenyu. Munzvimbo dzakawanda, vanhu vava kurarama nguva yakati rebei kupfuura zvaiitika makore zana apfuura. Asi rufu ruchakapfunya chisero. Sezvinotaurwa neBhaibheri, ‘vose vanodzokera kuguruva.’—Muparidzi 3:20.
Chinofadza ndechekuti hatifaniri kuvimba nenjere dzevanhu kuti vagadzirise dambudziko iri rava nemakore. Jehovha Mwari akaronga kare kuti atiponese kana kuti kutinunura parufu, uye Jesu Kristu ndiye akapiwa basa guru paurongwa uhwu.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Sei Tichida Kuponeswa?